Inuusan Wenger ahayn macallinkiisii ugu fiicnaa, halka arrin ee uu ka shallaayay xilligiisii Arsenal, difaacyadii ugu adkaa ee wajahay & Andrey Arshavin oo ka sheekeyay waqtigiisii Gunners – Gool FM
(Yurub) 01 Abril 2020. Ciyaaryahankii hore ee Arsenal, Andrey Arshavin ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku xayndaaban xilligii uu ku sugnaa kooxda Ingiriiska ka dhisan.
Arshavin ayaa Gunners ku qaatay muddo afar sano ah, isagoo ku sugnaa intii u dhexeysay 2009 illaa 2013 kaddib markii uu ka soo tagay kooxda Zenit St Petersburg.
Laacibka hore ee qaranka Ruushka ayaa farta ku fiiqay xiddigihii ugu adkaa ee ku wajahay horyaalka Premier League, waxaana uu Rio Ferdinand iyo Nemanja Vidic uu ku tilmaamay inay yihiin kuwii ugu adkaa ee uu ka hor tagay.
“Waxaa jiray ciyaartoy badan oo waa weyn xilligeygii, waxay ku sugnaayeen Manchester United, Liverpool iyo Chelsea.” ayuu hadalkiisa ku billaabay Arshavin.
“Balse labadii ugu adkaa waa Rio Ferdinand iyo Nemanja Vidic, marka ay isla ciyaarayaan waxay la mid yihiin dibiyo, mana ka dhex dusi kartid.” ayuu u sheegay 888sport.
Kabtankii hore ee qaranka Russia ayaa sidoo kale hoosta ka xarriiqay in Arsene Wenger uusan ahayn macallinkii ugu wanaagsanaa ee uu ka hoos shaqeeyo, balse uu u arko inay sharaf u ahayd la shaqeynta macallinka reer France.
38-sano jirkan ayaa Wenger ka door-biday macallimiinta kala ah; Guus Hiddink iyo Dick Advocaat oo uu labadoodaba kala shaqeeyay qaranka Ruushka.
“Halka shallaay ee aan qabo ayaa ah inaan koob kula guuleysan waayay Kooxda Arsenal.
“Gaar ahaan final-kii League Cup-ka ee aan la ciyaarnay Birmingham oo heerka labaad u laabaneysay, xitaa kulankaas waa na laka adkaaday.” ayuu yiri mar uu Arshavin ka hadlaayay koob la’aantii uu kala soo laabtay Emirates Stadium.
Sidoo kale waxaa uu ka carrabka ku dhuftay inuu ka xumaaday in Samir Nasri, Cesc Fabergas iyo Robin van Perise ay ka tagaan Arsenal, isagoo aaminsan in haddii ay labo sano illaa saddex sano ay sii joogi lahaayeen ay koobab hanan lahayd Gunners.
Andrey Arshavin ayaa isaga tagay Arsenal sanaddii 2013-kii, waxaana guud ahaan ciyaaraha kubadda cagta uu soo gabagabeeyay sanadkii 2018-kii.
Fabregas oo doortay liiska macalimiintii ugu fiicneyd ee uu la soo shaqeeyay... (Guardiola oo ka maqan, Miyuu ku jiraa Mourinho?)